यस्ता छन् हजारौँ रुपियाँका पुरस्कार जित्ने फोटोहरु – MySansar
यस्ता छन् हजारौँ रुपियाँका पुरस्कार जित्ने फोटोहरु
Posted on June 28, 2013 July 14, 2013 by Salokya
पीजे क्लबले आयोजना गरेको फोटो प्रतियोगितामा सात विधामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो घोषणा भएको छ। पहिलोले ३० हजार, दोस्रोले २० हजार र तेस्रोले १० हजार नगद पुरस्कार पाउनेछन्। कस्ता छन् त हजारौँ रुपियाँको पुरस्कार जित्ने फोटो ? त्योभन्दा अगाडि तपाईँले लाख रुपियाँ जित्ने फोटो हेर्नुभयो? नहेर्नुभएको भए यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्। यसबाहेक निर्णायक चरणमा पुगेका १५१ फोटोहरु पनि माइस‌ंसारमा राख्दै जानेछौँ।
न्युज विधाका उत्कृष्ट
३० हजार नगदसहित प्रथम पुरस्कार जित्ने फोटो-
शैलेन्द्र खरेलले क्यानन फाइभ डी क्यामेराले खिचेको यो फोटो काठमाडौँको मनहरा नदी किनारमा सीता एअरको विमान दुर्घटना हुँदाको हो।
२० हजार नगदसहित दोस्रो पुरस्कार जित्ने फोटो-
अशोक दुलालले निकोन डी ३०० बाट खिचेको यो फोटो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई थप्पड हानेपछि कार्यकर्ताको कुटाइबाट घाइते पदम कुँवरलाई प्रहरीले बचाएर लैजाँदै गर्दाको हो।
१० हजार नगदसहित तेस्रो पुरस्कार जित्ने फोटो-
निरन्जन श्रेष्ठले क्यानन फाइभ डी मार्क २ बाट खिचेको यो फोटो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध नेविसंघले निकालेको मसाल जुलुसका क्रममा भएको प्रहरी हस्तक्षेपको हो।
यो विधामा पुरस्कार जित्ने सबै पेशाले फोटो पत्रकारहरु हुन्।
स्पोर्टस विधाका उत्कृष्ट
पार्वती लामाले क्यानन सेभेन डीबाट खिचेको यो फोटो श्रेया धितालको हो। सातदोबाटोको स्विमिङ कम्प्लेक्समा यो फोटो उनले खिचेकी हुन्। उनी फ्रिलान्सर हुन्।
पेशाले ब्याङ्कर सञ्जीवकुमार मोक्तानले यो फोटो क्यानन ६० डीले खिचेका हुन्। वीरगञ्जमा माघे संक्रान्तिमा हुने कुस्ती प्रतियोगिताको फोटो हो यो।
फोटोग्राफर मनीष पौडेलले निकोन डी २०० ले खिचेको यो फोटो सिमरा गोल्डकपको हो।
कल्चर एन्ड टुरिजम विधाका उत्कृष्ट
फोटोग्राफर सन्जोग मानन्धरले क्यानन फाइभ डी मार्क टुले खिचेको यो फोटो माधवनारायण जात्राका बेला साली नदीमा नुहाउँदै गर्दाको हो।
विशाल गौतमले यो फोटो बिस्केट जात्रामा खिचेका हुन्। क्यामेरा मोडल थाहा भएन। निकोन डी ६००।
रजेन्द्र केसीले निकोन डी ३०० ले खिचेको यो फोटोमा एक बालिका काठमाडौँमा परम्परागत नेवार पहिरनमा परिवारसित हिँड्दै गरेको देखिन्छ।
डेली लाइफ विधाका उत्कृष्ट
फोटो पत्रकार सूरज श्रेष्ठले पोखराको छिने डाँडामा क्यानन सेभेन डीबाट यो फोटो खिचेका हुन्।
पदमसागर कक्षपतिले निकोन डी ९० बाट यो फोटो हनुमानढोकामा खिचेका हुन्।
दशैँको नवौँ दिन मनाइने खः म्ये जात्राको यो फोटो दिवाकर मास्केले निकोन डी ५० बाट खिचेका हुन्।
नेचर एन्ड वाइल्डलाइफ विधाका उत्कृष्ट
भुँडीफोर गरुडले चुम्बन गर्दै गरेको यो फोटो दीपेन्द्र महर्जनले क्यानन सेभेन डीबाट खिचेका हुन्।
यात्रा थुलुङले सुनसरीको तरहरामा यो फोटो खिचेका हुन्।
दिनेश गोलेले निकोन डी ३०० एसबाट यो फोटो टौदहमा खिचेका हुन्।
नेपाल स्माइल्स विधाका उत्कृष्ट
सिजन कार्कीले क्यानन १००० डीबाट भक्तपुरको लोकन्थलीमा यो फोटो खिचेका हुन्।
निश्चल ओलीले यो फोटो क्यानन फाइभ डी मार्क टुबाट गोदावरीमा खिचेका हुन्।
नारायण महर्जनले यो फोटो निकोन डी ५००० ले खिचेका हुन्। उनले फोटोमा क्याप्सन नपठाएकाले कहाँ खिचेको थाहा हुन सकेन।
यसबाहेक फोटो स्टोरीमा पनि विजेता घोषणा गरिएको छ। फोटो स्टोरीमा प्रथम शैलेन्द्र खरेल, दोस्रो वीरेन्द्र बज्राचार्य र तेस्रो किरण पान्डे रहे। फोटो स्टोरीमा धेरै फोटो हुने भएकोले अलग्गै ब्लगमा राखिनेछ।
पुरस्कार नजितेका तर अन्तिम चरणमा पुगेका फोटोहरु
निर्णायक चरणबाट छानिएका १ सय ५१ फोटोलाई काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा, नेपालगन्ज र धनगढीमा प्रदर्शनी गरिनेछ। असार २६ गतेदेखि काठमाडौँको आर्ट काउन्सिलमा प्रदर्शनी हुनेछ। अन्तिम चरणमा पुग्न सफल फोटोहरु पनि पछि माइसंसारमा राख्नेछौँ।
विभिन्न विधामा वर्षका उत्कृष्ट फोटो हेरिहाल्नुभयो। तपाईँलाई सबैभन्दा राम्रो र मन छोएको फोटो कुन लाग्यो ? आफ्नो धारणा तल कमेन्टमा लेख्नुहोला।
23 thoughts on “यस्ता छन् हजारौँ रुपियाँका पुरस्कार जित्ने फोटोहरु”
साँचै अन्तिमको नारायण महर्जनले खिँचेको फोटो त मलाई पनि फोटोशपमा चलेर बनाएको जस्तो लाग्यो यसमा आयोजकको के टिप्पणी छ ?
सालोक्य जी, मेरो Culture and Tourism मा दोस्रो हुन सफल भयको फोटो Nikon D600 camera ले लिएको हो .
लास्ट को फोटो त फोटोसप गरेको जस्तो छ त दुइटा केटा को त छाया गायब छ त
सबै तस्विर अत्यन्तै सुन्दर ! टाइमिङ्ग र यांगल पनि अति नै टचि !
संजीव कुमारजी को फोटो हेर्दा त वहा प्रो फोटोग्राफर नै जस्तो लाग्यो ! स्पोर्ट्स विधाका सबै तस्विरहरु कुनै भन्दा कुनै कम देखिएन. सबैलाई बधाई !
न्युज विधा भन्नासाथ् हिंसात्मक तस्विरले प्राथमिकता पाउने हो कि के हो ? ३टै फोटो त्यस्तै ! मलाई त त्यस्तो फोटो हेर्न मन लागेन . तर बिजेताहरु लाई बधाई !
कल्चर एन्ड टुरिजम, डेली लाइफ, नेचर एन्ड वाइल्डलाइफ, नेपाल स्माइल्स विधाका फोटोहरु भने बयान गरिनसक्नु राम्रा ! सबै सर्बोत्कृस्ट !
तर हेर्दै जादा अन्तिम को फोटोमा भने धित्ता बुझाउन सकिन ! त्यो त पुरै फोटोसप्ड लाग्यो !
Every photo is special, different is that how and when it strikes the mind of viewer.
ख: मे जात्रा र गरुड किसिंग २ मोमेन्ट्स मेरा छनौट हुन् I कारणहरु:- shadow , colour , meaning , story , grouping , angle etc ) फस्ट फोटो भने निर्णायक’रुलाई घरमा सेन्ड गरिदिनुहोला!
नेचर एन्ड वाइल्डलाइफ….को भुँडीफोर गरुडले चुम्बन गर्दै गरेको…त्यो हिमालमा स्कुल बस कुरेको… अनि सबै फोटो राम्रो छ धन्यबाद फोतोग्रफेर्स ..pj club एंड my संसार..
धेरै धेरै राम्रा फोटोहरु रहेछन, तर निर्णायक मण्डलको निर्णयमा सहमत हुन सकिन, बिजयी फोटो भन्दा बिजयी नवयाका फोटोहरु धेरै राम्रा छन्
प्रचण्डलाइ थप्पड हानेको फोटो त दोश्रो हुन्छ भने, गोलि कसैले हाने त त्यो फोटो प्रथम नै हुन्छ होला !!!
हान्ने मान्छेले फोटो खिचाउन भ्याउला र ?
Nepal smiles विधाको फोटो First भएको चाहिँ चित्त बुझेन । त्यो भन्दा त Second र third नै राम्रो छ ।
अरू सब ठीकै लाग्यो । सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यो हिमालमा स्कुल बस कुरेको लाग्यो ।
News विधाको First फोटोमा पनि आधा scene साइकाल वालाले ढाक्नुको कुनै औचित्य देखिन्न । बरू, त्यो साइकलवाला नआउने गरि दुर्घटानाको मात्र राम्रो scene आउनेगरि खिचोको फोटो भए राम्रो हुन्थ्यो होला ।
यो मेरो OPINIONS हरू हुन् ।
सबै राम्रा छन् .सबै को आआफ्नै बिसेसता छ. उत्कृस्ट चै daily life अन्तर्गत को प्रथम लग्यो
मलाइ मन परेको त दिनेश गोलेको टौदह मा खिचेको फ़ोटोनै हो! अनि तेसपछी दिवाकर मास्केको दशैको म्हें जात्राको राँगो अनि तेश्रो चाहि भुडिफ़ोर गरुड को लाभ स्टोरी भन्दा तल्लो भुडिफ़ोर गरुडको ठुटे रुखको यात्रा कल्ले खिचेको र के हो थाहा भयन!
यी तिन फोटो यहा भयको अरु फोटो भन्दा मन परेर मैले पहिलो दोश्रो र तेश्रो छुट्यायको हो!
यदि मैले १ , २ , ३, नम्बेर दिने हो भने सबैमा १ भुँडीफोर गरुडले चुम्बन गर्दै गरेको दीपेन्द्र महर्जनले क्यानन सेभेन डीबाट खिचेका फोटो उत्कृष्ट हो।
Nature and wild life first prize winner photo seems the best however all photos can not be underestimated.
सुरज श्रेष्ठले पोखरा छिने डांडामा खिचेको राम्रो लाग्यो |
– दीन श्रेष्ठ
हो , सुरज श्रेस्ठ को पोखरा को स्कुल बस को फोटो सबै भन्दा घत लाग्दो छ. कति राम्रो हाम्रो देश ! त्यो आकास छेड्ने हिमाल अनि स्कुले बालिका बादल माथि को देश मा स्कुल बस कुर्दै. आह!
साथै निश्चल ओली को फोटो को बयान नगरी बस्न सकिन . कस्तो राम्रो फोटो Simply Natural Beauty .
सबै विजेता फोटोग्राफर मित्रहरुलाइ वधाई र अरु उज्ज्वल भविष्य को कामना छ !